Ukuzenzekelayo kunye nokuThengiswa kweNtengiso yeDijithali | Martech Zone
NgoMvulo, Meyi 13, 2013 NgoMvulo, Meyi 13, 2013 Douglas Karr
Sithumele nje i-infographic on Ukuthengisa ngobuninzi kuthelekiswa nokwenza ubuNtu Obeye wathetha ngezibonelelo zonxibelelwano olwenzelwe wena ngaphezulu kwebhetshi kunye nentengiso yendlela yokuthengisa. U-Pardot uvelise oku kulandelayo kuthetha infographic Ukuzenzekelayo kwentengiso kunye nokwenza ubuqu.
Ukuze uphumelele kwindawo yentengiso yanamhlanje, abathengisi kufuneka benze intengiso yabo kunye namava ewebhu kubathengi babo nakulindelo lokuthengisa ngokufanayo. Nangona kunjalo, ngokuka isifundo esitsha kwi-Econsultancy, Abathengisi abaninzi bayasokola ukuphumeza ubuqu kwimizamo yabo yentengiso yedijithali.
Enye yezinto ezintle zenkqubo yokuthengisa ezenzekelayo kukukwazi ukuqokelela idatha ethe ngqo kwithemba kunye nokubamba indlela abaziphatha ngayo ngokuhamba kwexesha. Ukwenziwa komntu kwisikolo esidala kufuna iifomati ezibanzi ezinamazinga aphezulu okushiya. Usebenzisa ukuzenzekelayo kwentengiso, ungayibamba kancinci kancinci idatha kwaye uqhubeke nokucokisa amaphulo akho, uwenze afaneleke ngakumbi kwithemba njengoko ufunda ngakumbi ngawo. Oku kunciphisa ukushiywa kunye nokunyusa izinga lokuguqula.
tags: ukuzenzekela ngokuzenzekelayoUnxibelelwano lokuthengisauxoleloNgokwezifiso
Kutheni iividiyo zakho zeshishini kufuneka zikwiVimeo